samedi, 28 mars 2020 21:52
Mahajanga : Tovolahy iray, zanaka mpanao mofo, nisy namono tao an-tranony
Oussama Abad, tovolahy iray 23 taona, zanaka mpanao mofo (Boulangerie Abad) no hita faty tao an-tranony ao Aranta-Mahajanga androany. Mampiahiahy ity tranga ity, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana satria nisy olona iray trano amin’ilay tovolahy, nivoaka nisakafo. Tamin’ny fotoana niverenan’ireo olona ireo nisakafo dia i Oussama Abad efa maty ary nifatotra no novantanin’izy ireo tao an-trano. Efa eo ampelan-tanan’ny mpitandro ny filaminana ny famotorana amin’izay hamantarana ny antony sy ny mety ho tompon’antoka amin’izao vono olona feno habibiana izao.
samedi, 28 mars 2020 17:26
Coronavirus: 1000 teo no maty tao anatin'ny 24ora tany Italia
969 no maty omaly zoma 27 marsa tany Italia tamin'ilay valanaretina coronavirus. Efa 9 134 no nodomandry amin'izao, ary 86 498 ireo tratran'ny tsimokaretina any an-toerana. (Jereo Sary Tohiny)
Andry Rajoelina: Mitsidika ny Institut Pasteur de Madagascar
Ivontoerana hany tokana eto Madagasikara anaovana ny fitiliana ary nivoahan’ny antotanisa momba ity valanaretina coronavirus ity, nanomboka ny zoma 20 marsa 2020 ny Institut Pasteur de Madagascar etsy Avaradoha – Antananarivo. Tonga nitsidika an’ity ivontoerana ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina io tolakandro io, nisaotra ny fahaizamanaon’ny mpiasa ao, ary koa nifampitafa tamin’ireo mpitantana ny amin’izay hifanampiana hanatsarana izao fiarahamiombon’antoka amin’ny fiatrehana ity valanaretina ity izao. (Jereo Sary Tohiny)
Nandray fanapahan-kevitra ny fanjakana nampiato vonjimaika ny « Tsena Mora » noho ny tsy fanajan'ny olona ny fepetra izay napetraka mba hiarovana amin'ny mety ho fiparitahan'ny valan'aretina Coronavirus. Voakasik’ity fepetra ity ny « Tsena Mora » amin’ireo Boriboritany enina eto Antananarivo Renivohitra, Antsimondrano, Avaradrano ary Ambohidratrimo. Hijery ny lamina sy ny fomba hametrahana izany fitandrovana ny tsirairay izany ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Hiverina indray ny fitsinjarana aorian’izay, amin’ny herinandro ho avy.
Mihiboha an-trano ho fifampiarovana ! Aza andrasana handray fepetra hentitra ny Mpitandro filaminana vao ho tonga saina isika, hoy ny avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. Niditra an-tsehatra ny alika mpitsongodia nanomboka tamin’ity androany ity ho fampanajana ny fepetra io fihibohana an-trano io, hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. (Jereo Sary Tohiny)
Nanokatra Tahiry manokana hiadiana amin’ny coronavirus ny Mpanjakan’i Maroc, Mohammed VI. Nanolotra ny karamany iray volana ireo depiote sy minisitra ho anjara biriky hanohanana ny ady amin’ny coronavirus ao amin’ity firenena ity. Miisa 346 no mitondra ny tsimokaretina coronavirus any Maroc raha ny antotanisa navokanan’ny Vondrona Afrikana tamin’ity andron’ny sabotsy 28 marsa 2020, 23 namoy ainy ary 11 no sitrana tamin’ity valanaretina ity tany an-toerana.
Lehilahy teratany Malagasy, 43 taona, mipetraka eto Antananarivo ny iray amin’ireo olona roa vaovao mitondra ilay tsimokaretina coronavirus. Azony avy amin’ny fifampikasohana ny azy. Teratany Italianina, 66 taona, tonga teto Madagasikara tamin’ny sidin’ny Ethiopian Airlines ny 17 marsa 2020, ny faharoa. Miisa 28, hatramin’ity Sabotsy 28 mars 2020 mitatao vovonana ity, ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara, araka ny tatitra nataon’ny Pr Vololotiana Hanta, mpitondrateny ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus. Tsy ahitana soritr’aretina ny 20 amin’ireo, misy soritr’aretina toy ny gripa ny 5, ary mampiseho soritr’aretina sempotra ny 3. Tsy misy kosa ny aina nafoy, hoy hatrany Pr Vololotiana Hanta, izy farany izay manamafy ny tokony hanajan’ny olompirenena ny fihibohana an-trano, satria ity tranga ity dia manaporofo indray fa ny fifampikasohana dia efa ampy ifindran’ity valanaretina ity. (Jereo Sary Tohiny)
« Ramalina aza hono mifehy hazo tokana koa nanao ny fitiliana ny tenako. Salama tsara aho, misaotra an'Andriamanitra, ary vonona hatrany hiasa ho an'ny Tanindrazana eo anilan'ny vahoaka Malagasy ». Izay no fanambarana nataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, androany tao amin’ny kaontiny Instagram. (Jereo Sary Tohiny)
Mpikambana ao amin’ny governemanta any Namibia i Emma Theofilus. Ny 23 marsa 2020, anatin’ny vanim-potoana mampirongatra ny valanaretina coronavirus manerantany, no nanendrena azy ho minisitra lefitra misahana ny teknôlôjia, ny fampahalalam-baovao ary ny serasera. Manam-pahaizana momba ny lalàna izy, nianatra tao Namibia sy tany Afrika Atsimo.
Araka ny toro-mariky ny filoha frantsay Emmanuel Macron, dia nanao fanambarana ny praiminisitra Edouard Philippe androany zoma 27 mars fa ampitomboana 15 andro indray ny fihibohan'ny rehetra an-trano ka tsy hifarana izany raha tsy ny 15 aprily. Nambarany fa mety mbola hiitatra io raha mbola tsy voafehy ny aretina. 1696 hatreto no namoy ny ainy, ary 13 904 no any amin'ny hopitaly manaraka fitsaboana, 5 ny mpitsabo maty, ary zandary 1. 299 ireo maty tao anatin'ny 24ora farany. Raha ny ambaran'ireo dokotera mpahay ny areti-mifindra, dia 40 andro (quarantaine) no ilaina mihiboka tanteraka vao mahomby ny ady, nefa ao anatin'izay dia manao fitiliana, fitiliana, fitiliana marobe. Miakatra 20 000 isan'andro amin'io herinandro io ny fitiliana atao any Frantsa.
Page 5 sur 537